Luyini uTorrent nokuthi ulusebenzisa kanjani | Izindaba zamagajethi
Kuyini uTorrent nokuthi uyisebenzisa kanjani
UJose Rubio | | General
Kusukela i-intanethi ifike emakhaya ethu, amathuba okufinyelela kokuqukethwe okungenamkhawulo kuwebhu akhuphuke kakhulu. Cishe eminyakeni eyishumi eyedlule, sakuthola cishe kungenakwenzeka ukulawula ikhompyutha etholakala kolunye uhlangothi lomhlaba ukude kusofa wethu, inekhwalithi eyenele yokukwazi ukusebenza ngokunethezeka futhi ngaphandle kweziphazamiso. Futhi namhlanje, ngekhompyutha nokuxhumeka kwe-inthanethi singenza okungacabangi.
Vele kunezindlela eziningi zokwabelana ngamafayela, kepha namhlanje sizoncika esifufuleni. I- torrent luhlobo nje lwe Ukulandwa kwe-p2p, noma okufana nakho, bheka ukulunguza. Lokhu, ngolimi lweCervantes akusho okungaphezu kwe- yabelana ngamafayela phakathi kwemishini emibili noma abasebenzisi. Futhi umphathi wesifufula owaziwa kakhulu uTorrent, esizokhuluma ngakho namuhla. Izosivumela share amafayela, kanye nokulanda futhi uvumele abanye ukuthi balande esikufunayo. Qhubeka ufunde futhi ungalahlekelwa yimininingwane ukuze uthole okuningi kuleli thuluzi eliwusizo.
Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi uTorrent iyatholakala kuwo womabili ama-Mac ne-PC ne-Linux. Kuzofanele singene kufayela lakho le- iwebhusayithi esemthethweni bese ucindezela inkinobho eluhlaza esizoyibona emehlweni ukuyilanda. Inqubo izoqala ngokuzenzekelayo, ilande isifaki esifanele sohlelo lwethu lokusebenza. Uma sesilandile, kufanele silandele izinyathelo ezikhonjiswe yisifaki uqobo ukuze ekugcineni iTorrent isivele isebenza emshinini wethu.
Lapho uvula uhlelo okokuqala ngqa, kufayela lakho le- isikrini esikhulu sizobona izingxenye ezintathu ezihlukaniswe ngokucacile. Okubaluleke kakhulu yi- isikhala sokulanda, lapho sizoba nemininingwane ehlukahlukene mayelana nokulanda ngakunye esiqhubeka nakho, njengoba sizobona kamuva. Ngakwesobunxele sizoba ne- ibha eseceleni, lapho singabandlulula khona ukuthi yimaphi amafayela esiwabona esibukweni ngokuya ngesimo sawo: ukulanda, ukuqeda, ukusebenza, ukungasebenzi noma konke. Ezansi kwesikrini sizoba nefayela le- iphaneli lemininingwane ngamathebhu amaningana, lapho singakhetha khona imininingwane efana ne- layisha nesivinini sokulanda ngesikhathi sangempela imidwebo, ulwazi oluvamile mayelana nefayela okukhulunywa ngalo, ifayela le- amafolda eyakhiwe ngayo, njalonjalo.
Kubaluleke kakhulu uma uhlelo selufakiwe futhi ngaphambi kokuqala ukuyisebenzisa, ukuthi senze i- ukumisa okulungile ofanayo. Ngakho-ke, ulwazi lomsebenzisi luzokwanelisa kakhulu, ukuthola isivinini kokulandwayo futhi konke okuqukethwe kwethu kuhleleke kakhudlwana. Kunjalo ukutshala imali imizuzu emihlanu kulolu chungechunge lwezinto esizichaza ngezansi.
Esigabeni jikelele kusuka kumenyu yokuncamelayo, esizoba nayo izinketho ezahlukene lokho kungachazwa ngokwabo. Izinketho ezifana ukuqala okuzenzakalelayo kohlelo lokusebenza lapho sivula okokusebenza kwethu, buza ngaphambi kokuhamba, qala ukulanda ngokuzenzakalela noma ulimi, Ngokwesibonelo. Kafushane, izilungiselelo eziyisisekelo yokusetshenziswa esivunyelwa uhlelo.
Enye yezinketho ezibaluleke kakhulu ekusebenzeni kahle kweTorrent yi- the ukumiswa komkhawulokudonsa. Imvamisa uTorrent uyayiphatha ngokuzenzakalela (nebhokisi lokuqala elihloliwe), kepha singanquma lokhu ngesandla. Yebo uma ungafuni ukuthi ukulandwa kwezifufula kwenziwe ngawo wonke umkhawulokudonsa wenethiwekhi yakho, noma ngoba ufuna ukuwukhawulela ukuze ungadluli inombolo ethile ikakhulukazi, ungaguqula inani ngalinye ngesandla, kokubili ngokulanda nokulayisha. Uma unayo imali ye-inthanethi ngenani elithile lemininingwane elinganiselwe, kunenketho ebizwa ngokuthi isilinganiso somkhawulo, lapho ungakwazi khona lungiselela inani ledatha ukuthi uvumela uhlelo ukuthi lwabelane, noma phezulu noma phansi, esikhathini esithile.
Futhi ekugcineni, kungenzeka kokumiswa okungakusiza kakhulu lapho uphatha ukulanda ngeTorrent kungokwayo uhlelo lokusebenza. Kuthebhu ebizwa ngegama lakhe, kuzofanele wenze njalo maka ibhokisi bese ungayisetha ngendlela othanda ngayo. Iseli ngalinye lihambisana ne- uhla lwehora elilodwa ngosuku ngalunye lwesonto, futhi ibhalwe ngemibala enezinketho ezine ezihlukile: angenamkhawulo, umkhawulo ucushiwe, kuphela ukuhlwanyela nohlelo kungasebenzi. Ngalokhu ungakwazi lungiselela umsebenzi wohlelo kuya ngomthwalo ovame ukuba kwinethiwekhi yakho yasekhaya, ukuvumela ukuthi ngenkathi usebenza nekhompyutha yeTorrent kungeqi umkhawulo obekwe nguwe ezansi kwesikrini, ngenkathi usebenza amahora amancane kunethiwekhi, unejubane elingenamkhawulo. Uma lezi zinketho zinganele kuwe futhi ijubane lenethiwekhi yakho lihamba kancane, khumbula lokhu namasu wokuthuthukisa ijubane kunethiwekhi yakho ye-WiFi.
Uma uhlelo lokusebenza selumisiwe, sekuyisikhathi sokuqala ukulanda. Ukuze ukwazi ukulanda ngeTorrent, sizodinga kuqala ukuba nefayela le-.torrent yalokhu esifuna ukulanda. Leli fayela elinesandiso se-.torrent alilutho ngaphandle kwe- idokhumenti encane okuthi, lapho ivulwa ngeTorrent, inikeza imininingwane eyisisekelo yalokhu esifuna ukukuthola, nokuthi kufanele ukulande kuphi. Singabathola kuyo yonke inethiwekhi, emakhasini ajwayelekile "omculo nokulanda ama-movie". Kulokhu okuthunyelwe ngeke sisho lutho, ngoba kungashintsha njalo, futhi mhlawumbe isikhashana, ngeke kusatholakala.
Kepha yinye kuphela eyanele ukusesha okuncane kwe-google ukubhala lokho esifuna ukukulanda nesibongo «sesifufula» futhi ngeke kube lula ngathi ukukuthola. Kumele nje ukulanda lelo fayela ngesandiso se-.torrent futhi uma uvula iTorrent izonakekela okusele.
Uma isivulwe ngeTorrent, izovela kufayela le- download isikrini. Imininingwane ebalulekile okufanele icatshangwe yile:
El inombolo wefayela esililanda
Ibha inqubekela phambili kokukhishwa, njengephesenti
El isimo zokulanda, njengoba kuzoba namafayela angasebenzi isikhathi esithile
La velocity iyalayisha futhi ithula, etholakala kuthebhu "Yesivinini" yepaneli engezansi.
Ngale datha singakwazi qapha ngesikhathi sangempela isimo sokulanda kwethu. Lapho ibha yenqubekelaphambili isiqediwe futhi ifinyelela ku-100%, kuzobonisa ukuthi ukulanda kwethu sekuqedile, ngakho-ke sizovele sibe nefayela kufolda esiyikhombisile njengendawo okufiswa kuyo eTorrent. Kuzofanele siyivule ngohlelo oluhambisanayo futhi sikujabulele kukhompyutha yethu.
Uma ukhetha ukusebenzisa ezinye izindlela ze-P2P, ungaphuthelwa i-athikili yethu ku amaseva eMule ngawo futhi ungalanda amafayela kalula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Kuyini uTorrent nokuthi uyisebenzisa kanjani
Ukuhlaziywa kwe-Samsung Galaxy Watch, iwashi le-premium range le-Android